कलाकार यासेली योङहाङ आफूलाई लिम्बूहरुकै ह्याण्डसम घोषणा गर्छन् (भिडियो सहित)
किरात मीथक र मुन्धुमका ज्ञाता यासेलीले लेख्ने प्राय: गीत-नाटकहरू चेतना प्रदान गर्ने जुझारू खालका हुने गर्दछन् । चुम्लुङ केन्द्रीय महाधिवेशनबाट सचिवालय सदस्यको रुपमा मनोनित भईसकेका यासेलीको जन्म आमा मनरानी बेघा लिम्बूको कोखमा २०३० साल भदौ ४ गते नागी, पाँचथरमा भएको हो । सुनुहाङ योङहाङको स्वरमा ‘सिक्कुमाङ..भन्ने गीत २०४८ सालमा रेकर्ड भएको उनको प्रथम गीत हो । ‘आनी साक्थिम’ मा पहिलो चोटी उनले गीत गाएका हुन् । ‘सहिदकी आमा’- २०५०...
मोडलिङ एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ युवापुस्ताको रंगीन सपना फूलेको हुन्छ । मोडलिङबाट नाम कमाउने ढृड आकांक्षा बोकेर यहाँ दिनदिनै नयाँ–नयाँ प्रतिभा भित्रिरहेका हुन्छन् । यसै पंक्तिमा पर्छिन् मौसमी कन्दङवा लिम्बू पनि । मौसमीलाई मोडलिङले काठमाडौंसम्म डो¥याएको छ । तेह्रथुमको थोक्लुङमा जन्मिएर झापामा हुर्केकी मौसमी भन्छिन्, ‘मोडलिङमा रुचि नभएको भए सायद काठमाडौं आउँदिन थिएँ ।’ दुई वर्षअघि मोडलिङमा करिअर बनाउने सपनाको पल्लाभारी बोकेर काठमाडौं भित्रिएकी मौसमीले छोटो समयमै एक...
आलोक माबोहाङ लिम्बू ताप्लेजुङ । मेरिङदेग गाउँपालिका ४ नम्बर वडा, लिङतेप निवासी पूर्णकुमार लंवा लिम्बूले चोर पत्ता लगाउने ‘अटो सेक्युरिटी सिस्टम’ प्रविधिको विकास गरेका छन् । उक्त प्रबिधिले सेन्सरका माध्यमबाट एकै साथ फोटो र भिडियो लिन्छ । सेन्सरकै माध्यमबाट सम्बसन्धित ब्यक्तिलाई फोन पनि गर्छ । मोबाइल फोन सेट, लेन्स (क्यामेरा) रेडियोका बिभिन्न पार्टसे जडान गरेर सेन्सरको माध्यमबाट उक्त प्रबिधि लामो समयको अनुसन्धानपछि तयार गरेको लिम्बूले Phaktanglung Online TV (फक्ताङलुङ अनलाइन...
कुनै बेला नेपाल टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मेरी बास्सै’ मा धुर्मुसको भूमिका निर्वाह गरेर लाखौं दर्शकको मन जित्न सफल हास्यकलाकार हुन्  । २०७२ सालमा गएको विध्वंसकारी भूकम्पपछि श्रीमती कुञ्जना घिमिरेसँगै स्वस्फूर्त रूपमा राहत वितरणदेखि बस्ती निर्माणसम्ममा सक्रिय भएको सीताराम र कुञ्जनाको जोडी अहिले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउने अभियानमा केन्द्रित भएको छ । हालै रंगशाला निर्माण हुने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा उक्त कार्यका सम्बन्धमा टीका–टिप्पणी गर्ने...
‘छोरीलाई छुरा हान्नेको लास पनि बाकसमा फर्किएको हेर्न चाहान्छौँ’ (भिडियो)
युएई-चक्कु हानाहान हुँदा युएईमा एक जना नेपाली महिलाको ज्यान गएको छ । अरु तीन जना घाइते भएका छन ।नुवाकोटकी सोनी तामाङले चक्कु चलाउँदा काठमाडौंकी सिर्जना बरालको ज्यान गएको हो। ठेगाना नखुलेका ममता चौधरी, सलिना मगर र आशा दर्जी घाइते भएका हुन् । ‘बिदाको नाममा मदिरा सेवन गरेर सविता तामाङ एक्लैले तीन जना साथीलाई चक्कु प्रहार गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ,’ युएईका लागि कार्यबाहक राजदूत सागर फुयाँलले भने,‘उनलाई अनुसन्धानको लागि...
म बाहुनकी छोरी लिम्बूको छोरासँग डेढ वर्ष जति लभ परेपछि विवाह गरे !
घरेलु हिंसाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेकी शान्ता प्रसाईं थेबे समाज परिवर्तनको अभियानमा जुटेकी छन् । घरेलु हिंसाले समाजमा विकराल अवस्था सिर्जना गरेकाले परिवर्तनका लागि आफू संस्थागत रूपमा यो क्षेत्रमा लागेको उनी बताउँछिन् । पारिवारिक बाध्यता र स्वास्थ्यले समयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अवरोध भए पनि अहिले निरन्तरता दिइरहेकी शान्तासँग कुमार राउतले गरेको कुराकानी : ० ‘नेपाल नारी चेतनशील’ ले के गर्छ ? – विशेष गरी हामी घरेलु हिंसामा परेका महिलालाई सहयोग गर्छाैं...
गायिका पुर्णिमा लामाका दिदिबहिनि मिडियामा एकसाथ, यसरी गाए एक-अर्काको गीत (भिडियो सहित),
गायिका पुर्णिमा लामाका दिदिबहिनि मिडियामा एकसाथ, यसरी गाए एक-अर्काको गीत (भिडियो सहित), ...
ब्रिट्रिश आर्मीको छोरी नायिका भयो भनेर जिस्काउछन (भिडियो)-
ब्रिट्रिश आर्मीको छोरी नायिका भयो भनेर जिस्काउछन | Interview Miruna Magar Beautiful Nepali Actress ...
म यो क्षेत्रमा आफ्नो कला संस्कृति संरक्षणका लागि आएकी हुँ । बबिता फोम्बो, अभिनेत्री तथा मोडल
धेरैजसो नाम, दाम र शानका लागि कलाकारिता रोज्छन् । तर, अभिनेत्री तथा मोडल बबिता फोम्बो भने आफ्नो संस्कृति संरक्षणका लागि गन कलाकारिता गर्छिन् । भारतको लखनउमा जन्मेकी बबिताले सानैदेखि नृत्य गर्थिन् । नृत्य, मोडलिङ र अभिनयमै दशक बिताइसकेकी बबिताले ‘अम्लारी फूङ’ र ‘हेल्लुक्वाः’जस्ता लिम्बू भाषाका चलचित्रलगायत दर्जनौ म्युजिक भिडियो र र्याम्प शोमा हिडिसकेकी छन् । यिनै बबितासँग जम्काभेटमा एमपी सुब्बाले गरेको कुराकानी : ग्ल्यामरस क्षेत्र कस्तो लागिरहेको छ ? रमाइलो । यो...
‘हो, म कुमारी आमा बन्न चाहन्थें, तर सकिँन’ नायिका पूजना प्रधान,
पूजना प्रधान, नायिका यो १२/१४ वर्षको फिल्मी करिअरमा धेरै उतार चढाव आए हगि ? सबैको जीवनमा आउँछ, मेरो मात्र होइन । मान्छे हो मान्छेको लाइफमा सँधै उतार चढाव आइरहन्छ । म मात्र त होइन होला । (हाँसो) एउटा सेलीब्रेटी त धेरैको आइकन हुन्छ । त्यस्ता मानिसको जीवनमा आउने उतार चढावले धेरैलाई प्रभाव पार्छ । तपाईले कस्ता उतार चढाव भोग्नु भो ? मैले सामान्य रुपमा हेर्ने गरेको छु । हो म सेलिब्रेटी हुँ ।...